Tobonaan ciidamo ah oo ka socda Somaliland oo ku biiray jabhada uu hoggaamiyo Kornayl Caare - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaTobonaan ciidamo ah oo ka socda Somaliland oo ku biiray jabhada uu hoggaamiyo Kornayl Caare
February 12, 2019 Puntland Mirror Somalia, Somaliland, Somaliland 0
Sawiro laga soo qaaday goobta ayaa muujinaya ciidamo tobobnaan ah oo ku labisan tuutaha ciidamada.
Garoowe-(Puntland Mirror) Tobonaan ciidamo ah oo ka socda Somaliland oo ay ku jiraan saraakiil sare ayaa ku soo biiray jabhada uu hoggaamiyo Kornayl Caare.
Kornayl Siciid Cawil Caare ayaa Isniintii shalay saldhigiisa ku soo bandhigay ciidamada cusub ee ku soo biiray.
Ciidamada kasoo goosanaya Somaliland ee ku biiraya jabhada ayaa kordhaysay tan iyo markii ay saldhigeeda ka furatay Puntland sanadkii lasoo dhaafay.
Caare, oo ah sargaal sare oo katirsanaan jiray ciidamada maamulka Somaliland ayaa sheegay in uu uga soo tagay cadaalad daro iyo dulmi, waxaana jabhadiisa uu ugu yeeray “dulmi diid”.
September 23, 2018 Ciidamada maamulka Somaliland iyo Jabhadda Kornayl Caare oo markii ugu horeysay isku dhac dhexmaray
April 19, 2019 Madaxweynayaasha Puntland iyo Somaliland oo laga yaabo in ay kulan ku yeeshaan Dubai
Shir madaxeedka urur goboleedka IGAD oo Muqdisho lagu qaban lahaa oo saddex beri dib u dhacay
Muqdisho-(Puntland Mirror) Shir madaxeedka urur goboleedka IGAD ayaa saddex beri dib u dhacay, sida ay sheegeen ilo-wareed dib lomaasi oo lagu kalsoonaan karo. Shirka ayaa la filayay in beri oo bisha September 10 tahay uu [...]